I-Outbrain: Ukuqhuba kweTrafikhi ngeZindululo zeMxholo | Martech Zone
I-Outbrain: Ukuqhuba kweZithuthi kunye neeNgcebiso zeMxholo
NgoLwesibini, Julayi 3, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Sizame iinkonzo ezimbalwa ukubonisa izithuba ezinxulumene noko kwiphepha lethu elilodwa kwiMartech. Okwangoku siyavavanya Outbrain kwaye kufuneka nditsho ndichukumisekile. Nantsi ingcaciso yenkonzo:
I-Outbrain inesishwankathelo kubahlalutyi package ebonelela ngokunqakraza idatha kunye nokuthandwa kwisithuba ngasinye esingeniswe ngenkqubo yazo. Songeze ukutya kwethu ukwenza lula - kodwa sabelana ngezithuba zethu ezaziwayo. Umboniso kwindawo yethu, sinikela ngokuzikhethela nakuphi na ukucofa okuhlawulelweyo kwibhlog yethu ukuya kwisisa… ukhetho olumnandi kakhulu olulandelwe kwiqonga le-Outbrain.
Nalu usuku lwethu lokuqala lokukhetha ukuphuma kwe-Outbrain:
Eyona nto ibaluleke kakhulu, yeyethu Umxholo ofanelekileyo iyaboniswa kwiindawo ezinabaphulaphuli abaninzi kakhulu kunathi… kodwa ndiye ndithathe isigqibo sokuba loluphi uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ingakanani imali endizimisele ukuyisebenzisa ngokuchofoza. Leyo trifecta… indawo elungileyo, ixesha elifanelekileyo, kunye nexabiso elifanelekileyo. Ndijonge phambili ekuboneni indlela i-Outbrain enokuyiqokelela ngayo abafundi abatsha kuyo Martech Zone!
Kufakwe ngaphezulu kweendawo ezingama-50,000 XNUMX zabapapashi kunye neeblogi, i-Outbrain yeyona ndawo iphambili yokucebisa ngomxholo kwiwebhu. Iqonga lethu lihlanganiswe ngezantsi kwamanqaku kwiindawo ezininzi zokupapasha iipremiyamu apho abafundi bajonge khona ukuze bafumane umxholo omtsha. Oku kubekwa okungafaniyo kujongwa ngabafundi njengokwamkelwa ngohlelo, kusivumela ukuba sihambise abaphulaphuli abakumgangatho ophezulu abathengi abazichonga njengabanomdla kumxholo wentengiso
Fumana iwijethi yasimahla ukuqala ukubonisa umxholo ofanelekileyo wangaphakathi kwindawo yakho namhlanje.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaIngcebiso yomxholoumxholo wengcebiso yeinjiniiqonga lokucebisa ngomxholoumxholo wewijethi yokucebisaukukhuphaPPCUmxholo wewijethi enxulumene nokowidget
Kutheni iShishini lakho kufuneka liHambe kwiNtlalo
I-Seesmic Ping: Thumela naphi na, nangaliphi na ixesha nakweliphi na isixhobo
NgoJulayi 10, 2012 ngo-1:45 PM
Douglas ndibhalisa njani kwiBlog yakho. BTW, eli ngeniso kwi-Oubbrain lalifike ngexesha kwaye linolwazi. Enkosi!
Aug 1, 2012 ngo-8:07 PM
Inkulu into yokuba abapapashi bomxholo bafumane umxholo wabo ubonakale kumnatha.
Oktobha 16, 2012 ngo-1: 28 PM